Omunye isikhathi ayikwazi wabuya ukuboleka imali, charm ukuqiniswa kwesikweletu
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Omunye isikhathi ayikwazi wabuya ukuboleka imali, charm ukuqiniswa kwesikweletu
Ingabe "ukuqiniswa kwesikweletu" ngokuvamile kubonakala ngisho CM muva nje, kodwa abanye abantu ukuthi awazi Isnt yini noma cha kukhona lula.
Lokhu, kuyilapho isevisi aqinisekisayo abakweletayo amaningi, + njengento okumelwe igcinwe ngokuqinile khumbula indlela yokusebenzisa, yilokhu kukhona kungenzeka ukuthi zibuyiselwe ekuphileni yokuqala.
Nazi okuqukethwe izici ukuqiniswa kwesikweletu.
kuyinto ukuhlanganisa izikweletu futhi
ukuqiniswa kwesikweletu, ezifana ezezimali umthengi kanye yasebhange, iyisevisi inkampani zezimali ukuthi ehlanganiswe imali lathathwa ababolekisi amaningi inkampani eyodwa.
wanquma a ababolekisi entsha, ngomunye senkokhelo, angase abe lula ukuphatha, ukuthi inzalo eyodwa, kukhona inzuzo noma Ukwehlisa sokukhokhwa ingqikithi.
ukuqiniswa kwesikweletu ngokuyinhloko, ingenye indlela ukusiza abantu ayikwazi ukubuyiswa kwemali lwenziwa enjalo izikweletu amaningi.
Nokho, futhi abantu abanayo ngezinga elithile ngenzuzo anokuhambisana, uma usubhalisile ngokulandelana kwezinye izinkampani, kukhona icala ukuthi wayenqaba isibuyekezo esiteji.
hhayi kwemali eyengeziwe kuphela, kuba ukucabanga okuhle kwe-njengoba owakhiwa ikakhulukazi buyiselo.
Le sevisi ngokuyisisekelo yilokhu kukhulunywa ngakho amabhange ezinkulu ezifana. Nokho,
, it has eminyakeni yamuva kwenziwe njengoba umkhiqizo omusha nabo ngokuqine kangaka Machikin kanye ngesikweletu nezinyunyana kukamama. Nakuba
senzalo ngayinye ngaphandle, Nakaniwa, ngoba kukhona indawo isibe semali kanye nezinga lenzalo kwemihlomulo kulabo abangamalungu akhokhela sokukhokhwa yayo, uma ucabanga ukuqiniswa kwesikweletu, uma uhlola ezinye abahlinzeki Ake.
ezikweletini izinzuzo ukuhlanganisa, ukuthi baletha ndawonye usuku buyiselo komunye iyona enkulu kunazo zonke. Futhi ngamunye
ekupheleni kwenyanga ukukhokha, payday, izinsuku ezingu-35, esimweni lathathwa ezahlukene inkampani ngayinye, ukuze ube ezahlukene buyiselo usuku, hhayi amaphutha ambalwa, ezifana ukukhohlwa engaqondile.
futhi ukuze aqede ukukhathazeka okungaka kusengaphambili ukuze uvikele usuku ukubuyiswa kwemali, kuhlelwe bakwazi ukukhokhela okushoyo ukuthi kungcono ukusebenzisa ukuhlanganisa izikweletu.
Kungenzeka futhi ukuthi yokugcina ukubuyiswa kwemali isamba sinciphile.
Lokhu kungenxa yokuthi, esimweni ezahlukene buyiselo izikimu inkampani ngayinye, ngoba inani oyinhloko esingakanani okufanele usichithe lemali sokukhokha isikweletu siba ezahlukene. Ufuna ukuqeda izinkokhelo esikhathini esifushane
, kungcono ukuba ukhethe ngisho ukuqiniswa kwesikweletu Umuntu ocabanga ukuthi ubaluleke kangaka.
ngaphezu kwanoma yini enye, ukuthi akudingekile ukuba ukhokhe inzalo eyengeziwe, ungasho yini ukuthi izinzuzo ezibalulekile ngokuya ukulondoloza isikhashana.
Lona, ngoba labo abenza sokukhokhwa iphindaphindeke inkampani, kusukela kungenzeka ukuba sinqobe iphuzu lapho kuba nenani elikhulu kakhulu imali isithakazelo nje ngenyanga, siphinde kuholele ukuthi ijubane buyiselo iyakhula.
iphuzu odlulayo luhlolo
Ngale ndlela, kukhona eziningi izinzuzo abakweletayo amaningi, kodwa ukuqiniswa kwesikweletu, ngeke ukwazi ukusebenzisa ukudabula ku Ukuhlolwa Yiqiniso. Futhi-ke kuncike
isicelo uya khona, kodwa ake ukhumbule ukuthi kuyoba ebalulekile ngokuya amaphuzu, njengalezi ezilandelayo is badabula ikakhulu luhlolo. It is zokweboleka inani eliphelele ngo
? kwezinye izinkampani. Ezinjalo njengoba
5 noma ngaphezulu izinkampani, futhi kaningi kakhulu ababolekisi, kukhona ingozi ukuthi ikhredithi alahlekile. Futhi
? Okwenkampani we kwemali ngamunye bathola kwemali nge
10 Indoda, kuka Uthola ukubolekisa at amayunithi 500,000, kuyothiwa ukuza futhi ezahlukene okuvelayo ohlangothini ukuboleka.
? umlando ezingozi ukuba khona noma ukungabi
ikakhulukazi, uma kwakungekho ukubambezeleka ukubuyiswa kwemali, ezifana Aint Waba yokungakhokhi kuyodingeka wenze.
ngokwakho lapho behlola yini noma cha kukhona ingozi umlando, kuwumqondo omuhle ukunikela, nokuningi at imininingwane ukudalulwa ulwazi lekhadi siqu ejensi. Ubude zeminyaka inkonzo
? inkampani ngoba futhi inombolo isipiliyoni lezinsuku njengoba lomphakathi, ke lubonakale ingxenye ukuzinza lo msebenzi.
ngisho wathola eziningi esikhathini esifushane ngisho noma, mhlawumbe mgwaqo lula kungcono ukuthi kukhona imali ezihleliwe nyangazonke.
ukuboleka ezikweletini ukuhlanganisa kukhona izinkampani eziningana eziye waboleka kuze kube manje, ngeke ndawonye omunye inkampani, kuhloswe ukuthi omunye lokukhokha.
inani lenzalo liphansi uma liqhathaniswa kuze kube manje, kukhona sokunconywa isithakazelo esinjalo ukuyiveza.
uma ufaka ukuqiniswa kwesikweletu, ezifana zokweboleka inani inombolo bese ingozi umlando, kubalulekile ukwazi ukuthi kunenkinga ngolwazi credit.
ngisho kanjani izimo kakhulu inkampani okuhle, uma akukho credit ukuboleka imali, kusobala ukuthi lapho ngisho kimi wanikina ikhanda thwi. Esikhathini esidlule buyiselo umlando ka
siqu, ngemva kucatshangelwa izimo, ezifana nobude inkonzo, Zama uthintane for ukuqiniswa kwesikweletu. Uma
ezihlobene / manje ukuboleka imali